Umangalele iBig Brother othi umndeni wakhe awusakwazi ukuhlala ungayibuki | News24
LAST UPDATED: 2019-03-25, 20:09
Umangalele iBig Brother othi umndeni wakhe awusakwazi ukuhlala ungayibuki
Cape Town – Uyanda umsindo ngesizini yakamuva yohlelo iBig Brother njengoba isizini yesibili ye-Big Brother Naija isifakwe enkantolo udokotela waseNigeria okhala ngokuthi yenza umndeni wakhe uhlale uyigqolozele futhi awukwazi ukuyeka ukuyibuka.
UDkt Olusola Omoju usefake isicelo enkantolo sokuthi uMultiChoice umise ngokushesha ukusakaza iBig Brother Naija kuDStv kanye nakuGOtv ngenxa yokuthi umndeni wakhe awusakwazi nokunyakaza ngenxa yokuthakasela kakhulu lolu hlelo.
Ngokwamaphepha asenkantolo abonwe yiChannel24, udokotela uthi uma kungukuthi iBig Brother Naija iyaqhubeka nokusakazwa, “amandla akhe njengobaba okukhulisa izingane zakhe” azoba sengcupheni, njengoba efuna ukuqinisekisa ukuthi kunezinga eliphezulu lendlela yokuziphatha emzini wakhe.
OLUNYE UDABA: Imibono eyehlukene ngohlelo iBig Brother Mzansi
Uma ngabe lesi sivimbelo sikhishwa yinkantolo, singaphazamisa nabanye ababukeli basezwenikazi i-Afrika, ngale-nje kweNigeria, njengoba iBig Brother Naija isakazwa nakwamanye amazwe ase-Afrika nalapho abalandeli bayo bengaphuthwa yilolu hlelo oluwuchungechunge olukhombisa okwenzeka ngempela.
Ngenyanga eyedlule abantu baseNigeria bebethukuthele beveva kulandela ukuvela “kwemfihlo” yokuthi empeleni iBig Brother Naija ayishuthelwa kuleliya lizwe, kodwa ishuthelwa iNingizimu Afrika futhi kusetshenziswa indlu efanayo nale esetshenziswa uma kushuthwa uhlelo lwakuleli, iBig Brother Mzansi.
Emasontweni amathathu edlule kuphinde kwaba nesinye isigameko sokuhlukumeza ngokocansi ngesikhathi owesilisa ephuthaza waphinde wabambabamba owesifazane ngesikhathi elele, nokwaholela ekutheni axoshwe.
UDkt Omoju ukhala ngokuthi iBig Brother Naija yafakwa kuDStv yakhe ngaphandle kwemvume yakhe.
Uthi yena uzithandela “ezemidlalo, ezenkolo, ezemfundo kanye neziteshi zikaqedisisungu esitholakala ohlelweni lweDStv, kodwa wathi iBig Brother Naija yona igqugquzela ukungaziphathi kahle, ukungabi nasimilo kanye nezenzo zocansi futhi ayihambisani namagugu abantu baseNigeria anothile”.